U xoq Arduino, oo ah IDE loogu talagalay dadka ugu badan ee isticmaala Arduino | Qalabka bilaashka ah
U xoq Arduino, oo ah IDE loogu talagalay dadka ugu badan ee isticmaala Arduino
Barnaamijyada looxaanta Bilaashka ahi waxay noqonayaan kuwo casri ah layaabna maahan maadaama guddiyada sida Raspberry Pi ama Arduino ay noqonayaan kuwa la awoodi karo. Casharrada iyo casharrada fiidiyowga sidoo kale waa kuwo la awoodi karo oo waxay qaadataa dhowr saacadood oo keliya in lagu barto waxyaabaha aasaasiga u ah barnaamijyada. Sababtaas awgeed waxaa jira barnaamijyo badan oo isku dayaya inay ka caawiyaan abuuritaanka barnaamijyo gaar ah Arduino ama Raspberry Pi. Xitaa barnaamijyada lagu rakibo gudaha qalabkan si loo abuuro barnaamijyo kale, Raspberry Pi waxaan leenahay tusaalooyin badan.
Mid ka mid ah barnaamijyada ama barnaamijyada ugu caansan ee la xiriira Arduino waa Xoqo loogu talagalay Arduino, oo ah barnaamij loogu talagalay dadka adeegsada novice kaas oo naga caawin doona inaan abuurno barnaamijyo bilaash ah mashaariicdeena Arduino inay si sax ah u shaqeeyaan.
1 Waa maxay xoq loogu talagalay Arduino?
2 Sidee loo rakibaa xoqan loogu talagalay Arduino?
3 Guddiyadee ayaa la jaan qaadi kara SfA?
4 Xoqo loogu talagalay Arduino ama Arduino IDE?
Waa maxay xoq loogu talagalay Arduino?
Laakiin marka hore waa inaan dhahnaa waa Scratch for Arduino. Xoqo loogu talagalay Arduino waa barnaamij IDE ah oo loogu talagalay dadka isticmaala layliska. Qalab loogu talagalay Barnaamijyada kaas oo awood u siinaya abuurista koodh, isku-dubbaridkiisa iyo fulintiisa waqtiga dhabta ah. Barnaamijka wuxuu ku saleysan yahay barnaamijka caanka ah ee carruurta ee loo yaqaanno Scratch. Codsigan ayaa baaraya waxbarista Barnaamjiyada ee caruurta yar yar taas oo ay ugu mahad celinayaan baloogyada iyo barnaamijyada muuqaalka ah ee ka caawiya caruurta yar yar inay horumariyaan xirfadahooda ugu macquulsan. Ujeeddada 'Scratch for Arduino' waa in la isticmaalo barnaamijyo muuqaal ah iyo xannibaadda barnaamijyada si markaa isticmaale kasta, iyadoon loo eegin heerka barnaamijyadooda, uu u abuuri karo barnaamij Arduino.
Xoqida loogu talagalay Arduino wax xiriir ah lama laha xoqida ama mashruuca Arduino, sikastaba, maadaama ay yihiin mashruucyo bilaash ah, mashruucii ugu fiicnaa ayaa laqaatay si markaa qofka ugu dambeeya u adeegsan karo golahooda Arduino iyo softiweerkooda. In kastoo ay tahay inaan dhahno sedexdaan mashruuc isma wada xiriiraan. Taasi waa, xoqitaanku malaha ikhtiyaar u noqda xoqista Arduino sidoo kale Arduino IDE uma oggolaado barnaamijyo muuqaal ah oo leh fiilo la yiraahdo Scratch for Arduino Xoqo waa software kalidii iyo Xoqista loogu talagalay Arduino waa barnaamij madax-bannaan oo isku-dhaf ah oo sida Arduino IDE, ay ku jiraan wadayaasha goleyaasha Arduino qaarkood ee isgaarsiinta..
Thanks to the Community, Xoqitaanka loogu talagalay Arduino ayaa leh codsi loogu talagalay Android oo aan u oggolaanayn oo keliya taleefannada casriga ah inay la xiriiraan barnaamijka, laakiin waxaan sidoo kale tijaabin karnaa barnaamijka la abuuray iyadoo la adeegsanayo borotokoolka HTTP.
Sidee loo rakibaa xoqan loogu talagalay Arduino?
Barnaamijka loo yaqaan 'Scratch for Arduino' ayaa loo heli karaa barnaamijyo kala duwan, ugu yaraanna loogu talagalay barnaamijyada ugu caansan ee isticmaalayaasha ugu badan: waxaan ku rakibi karnaa Windows, macOS, Gnu / Linux iyo xitaa qaybinta Raspberry Pi, sidaa darteed waxaan barnaamijkan ku haysan karnaa kumbuyuutar kasta oo aan isticmaalno.
Laakiin ugu horreyntii, waa inaan helnaa barnaamijka lagu rakibo kombuyuutarkayaga. Daaran bogga rasmiga ah ee mashruuca Waxaan heli karnaa barnaamijyada dhammaan nidaamyada hawlgalka.
Haddii aan isticmaalno Windows, waa inaan laba-jibbaarno xirmada la soo dejiyey iyo raac saaxir rakibaadda oo ah inaan si joogto ah u riixno badhanka "xiga" ama "xiga".
Haddii aad isticmaasho macOS, hawshu waxay la mid tahay ama la mid tahay. Laakiin ka hor laba-gujinta xirmada aan soo dejisanay, waa inaan tagnaa macOS Configuration-ka oo aan hubinaa in nidaamka qalliinka uu u oggolaanayo rakibidda barnaamijyo aan lahayn rukhsad. Markaan sidan yeelno, waxaan fureynaa xirmada dalabka waxaanna ku jiideynaa arjiga galka codsiyada.
Haddii aan isticmaalno Gnu / Linux, markaa waa inaan isticmaalnaa marka hore soo dejiso xirmada u dhiganta barnaamijkeenaXaaladdan oo kale, ma ahaan doonto 64-bit ama 32-bit dhufto ee waa halkii haddii qaybintayadu ay isticmaasho xirmooyinka debian ama xirmooyinka Fedora, taas oo ah, deyn ama rpm. Markaan soo dejino xirmada u dhiganta qeybintayada waa inaan ka furnaa boosteejo galka, taas oo lagu sameeyo adigoo gujinaya midig guji booska waxaanan ku fulineynaa qeybta soo socota:
Ama waxaan sidoo kale ku rakibi karnaa adoo garaacaya waxyaabaha soo socda:
Dhowr ilbiriqsiyo ka dib markii aan rakibnay barnaamijka, waxaan ku yeelan doonnaa astaan ​​ku dhex jirta menu-keena loo yaqaan 'Scratch for Arduino'. Sidaad arki karto, rakibida IDE-gaan muuqaalku waa mid aad u fudud guud ahaanna uma baahna barnaamij dibadeed inuu si sax ah u shaqeeyo.
Guddiyadee ayaa la jaan qaadi kara SfA?
Nasiib darrose maahan in dhamaan looxyada Arduino Project ay la jaan qaadi karaan Scratch for Arduino. Xilligaan kaliya way iswaafajin karaan Arduino UNO, Arduino Diecimila iyo Arduino Duemilanove. Boorarka intiisa kale lama jaanqaadi karaan barnaamijka laakiin macnaheedu maahan inaysan fulin karin koodhka aan abuurnay, taasi waa, koodhka aan abuureyno loo dhoofin karo IDE kale si loo soo ururiyo loona fuliyo. Sida xoqida, SfA waxay kumbuyuutar ugu diri kartaa IDE sida Arduino IDE waxayna u diri kartaa barnaamijka gudiyada kale ee mashruuca ee la jaan qaadaya Arduino IDE iyo inay si sax ah u shaqeyn karaan iyadoon loo baahnayn inay ku xirnaadaan in shixnaddu u socoto Scratch iyo Arduino.
Marka la eego koodhka, nasiib daro arrimaha Ruqsadaha, feylalku ma ahan kuwo hagitaan guud ah, taasi waa, Faylasha loo yaqaan 'Scratch files' waxaa aqoonsan Scratch for Arduino laakiin kuwa barnaamijkan la jaanqaadi kara malaha. Xataa haddii nambarka ay soo saaraan labada barnaamij wuxuu la jaan qaadayaa Arduino IDE. Dhibaatadani waa wax hubaal ah in lagu waayi doono waqtiga ka dib iyo tabarucaadka Bulshada, laakiin xilligan lama qaban karo.
Xoqo loogu talagalay Arduino ama Arduino IDE?
Waqtigan xaadirka ah, hubaal waad la yaabi doontaa waxa u wanaagsan barnaamijka Arduino Xoqo loogu talagalay Arduino ama Arduino IDE? Su'aal culus oo caqligal yar lagu jawaabi karo hadaan runti ogaanno heerka barnaamijkeenu yahay. Xoqo loogu talagalay Arduino waa IDE loogu talagalay kuwa ugu khibrada yar uguna khibrada yar taas oo ay ka caawisay dhinaca muuqaalka ah ee barnaamijyada xannibaadda, wax la mid ah waxa loogu yeero barnaamijyada nus-dhamaadka ah. In kasta oo Arduino IDE uu yahay IDE khabiir iyo barnaamij dhexdhexaadiyayaal heer dhexe ah oo aan u baahnayn muuqaalka muuqaalka inay si sax ah barnaamijka u sameeyaan. Y haddii barnaamijku yahay ilmo ama dhalinyaro, way cadahay in Scratch for Arduino uu yahay barnaamijka ku habboon.
Laakiin, haddii aan heysano koox awood badan, kumbuyuutar kumbuyuutar ah ayaa kugu filnaan lahaa, waxaa fiican in labada xalba la helo. Sidii aan horey u sheegnay, Scratch for Arduino wuxuu nagu caawin karaa abuurista baloogyo iyo Arduino IDE ayaa naga caawin kara inaan barnaamijka u dirno guddiyo kala duwan, midkoodna Arduino ama mashruucyo kale oo la shaqeeya Arduino IDE. Laakiin, si kastaba xaalku ha ahaadee, doorashada adigaa iska leh Midkee doorataa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » U xoq Arduino, oo ah IDE loogu talagalay dadka ugu badan ee isticmaala Arduino
Ku jawaab nmorato
Sida loo sameeyo jukebox-ka guryaha lagu sameeyo iyo shaqsi ahaan